Eventbrite: Dhacdooyinka Runtii Way Fududeed | Martech Zone
Eventbrite: Dhacdooyinka Runtii Way Fududeeyeen
Wednesday, April 9, 2008 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Eventbrite waxaa la aasaasay horraantii 2006-dii iyo bil kasta mugga tikidhada la qaybiyo ayaa horayba ugu jira malaayiin kumanaan kun oo isticmaaleyaal ah. Waxaan arkay kii iigu horeeyay Eventbrite casuumaad ka timid dhacdo kor u qaaday Dr. Thomas Ho oo waxaan uga faaiidaystay 3 dhacdo oo horeba.
Inkasta oo nadiif ah, interface waa wax yar clunky. Waxaa jira TON astaamo lagu soo buuxiyay codsigan taasna, shaki kuma jiro, caqabadda ku saabsan helitaanka menusyada saxda ah meelaha saxda ah. Haddii waxa aad rabto oo dhan inaad sameyso ay tahay ku dar dhacdo deg deg ah oo aad ku casuuntid dad yar, waxaa jira saaxir fiican oo 4-tallaabo ah.
Haddii aad rabto inaad sameyso xulashooyin horumarsan (sahanno, jawaab-celin otomaatig ah, lambarro qiimo dhimis ah), waa inaad wax yar ka sii adag raadisaa. Waxaan ka helay dhammaan caawimaaddii aan ugu baahnaa faylashooda caawimaadda, intaa waxaa sii dheer, waxay leeyihiin a TON ee Casharrada waxtarka leh!
Haddii aad la yaaban tahay sababta aadan adigu sidan u sameyn doonin, waxaa jira sababo dhowr ah:
IMO, Faa'iidada ugu weyn ee 'Eventbrite' waa inaad si toos ah ugu daabacdo munaasabaddaada Dhacdo leh evdb (Macluumaadka Dhacdooyinka iyo Goobaha). Tani waxay kor u qaadeysaa dhacdadaada si ka baxsan xuduudaha akhristayaashaada waxayna ka dhigeysaa mid marin u ah bogagga kale, sida Yahoo soo socda.
Marka xigta waa nidaamka lacag bixinta iyo tikidhada adag, tani waa madax xanuun aanad rabin inaad kaligaa wax ka qabato! Eventbrite xitaa wuxuu leeyahay farsamo lacag celin ah!
Waxaa jira tan oo ah astaamo kale oo qabow - liisaska martida ee la daabacay, RSS ayaa u quudisa dhacdooyinkaaga, Facebook isdhexgalka, isdhexgalka Paypal, isdhaxgalka Google Checkout, API adag, qaab aad si fudud ugu daabacan karto boggaaga dhacdo, barnaamij xiriir la leh… adigu magacow! Iyo, waxaad ku hayn kartaa tabta horumarkooda iyada oo loo marayo Blog-ga Eventbrite.
Dhabarkaaga u fiirso, Eventbrite!
Istaag, in kastoo! Waxaan u helay inaan qiimeeyo qaar ka mid ah codsiyada Bixiyaha Adeegga Emailka hal mar iyo TicketMaster ayaa ku jiray isku dhafka. In kasta oo aysan iyagu ahayn kuwa loogu jecel yahay ganacsiga tikidhada tikidhada, haddana TicketMaster waa mid dhuleed oo aad u dagaal badan.
Ma hubo intee in le'eg oo TicketMaster ah, oo leh culeyskeeda xagga warshadaha iyo khidmadaha xad-dhaafka ah, ayaa istaagi doona oo u oggolaan doona bilaabid weyn sida Eventbrite oo sii wadi doonta inuu ku sii kordho guusha! Laga yaabee inaysan kari karin inay qabsadaan, hase yeeshe, haddii Eventbrite uu sii wado wax cusub!
Tags: maaraynta dhacdadamadal dhacdoxalka dhacdada
ProBlogger: Iibso Nuqul Buugga Darren!
Apr 10, 2008 at 9: 06 AM
Tan ayaan u eegay macmiil waana jeclahay waxa aan arko. Waxay garaacaysaa abuurista wax caado ah.
Apr 10, 2008 at 9: 18 AM
Waxaan ku tusi lahaa boggaga gundhigga ah, ee qaabaysan ee aan ku dhisay qaabeynta qaab-dhismeedka, Ian, laakiin macmiilku wuu ku xardhan yahay iyaga sidaa darteed ma doonayo inaan amaah qaato. 😉